Daawo:Xaalad deg deg ah oo lagu soo rogay Ferguson, USA
Tuesday November 18, 2014 - 18:53:07 in Maqaallo by Super Admin
Magaalada Ferguson ee gobalka Missouri ee dalka Maraykanka ayaa xaalad deg deg ah lagu soo rogay maanta xili la filayo in Maxkamada ay go’aan kasoo saarto dilkii loo geystay wiil Madow oo lagu magacaabo Michel Brown.
Gobalka Missouri Mr.Jay Nixon ayaa sheegay inuu heegan geliyey ciidamada, iyadoo laga cabsi qabo in markale banaanbaxyo ka dhacaan gobalkaasi, hadii dadka ku qanci waayaan go’aanka maxkamada.
Maxkamada ayaa go’aankeeda ku sheegi doonta in la xukumi doono Askarigii dilay wiilkaasi madow oo 9kii bishii Agoosto lagu dilay magaalada Ferguson isagoo aan wax hub ah sidan. Askariga dilkan geystay ayaa ah nin Cadaan ah.
Dilkaasi ayaa keenay banaanbaxyo rabshado wata oo saameeyey magaalada Ferguson, balse xiisadan ayaa ah mid si weyn u taabatay shacabka Maraykanka oo ku kala qeybsamay.